Maxay yihiin su'aalaha la weydiinayo macaamiisha, ka hor intaadan bilaabin sameynta astaantaada? | Abuurista khadka tooska ah
Kahor intaadan bilaabin mashruuc kasta oo ku lug leh naqshadeynta, waa loo baahan yahay hel macluumaad horudhac ah oo ku filan iyada oo loo marayo macaamiisha, maadaama sidan oo kale ay suurtogal tahay in laga fogaado wax kasta oo isfaham la'aan ah ee mustaqbalka, marka lagu daro in laguu oggolaado inaad xiriir dheecaan badan leh la yeelato dhammaan macaamiishaada.
Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer waxaa jira macaamiil "adag" si loo fahamsiiyo arrinta, waxay noqotaa wax yar oo ka sii adag oo waa in marka la sameynayo mashruuc naqshadeynta garaafka ah, ay lagama maarmaan tahay in laga feejignaado waa maxay fikradda uu macmiilku leeyahay, maxay yihiin yoolalka aad rabto inaad gaarto, shirkad caynkee ah iyo qaar kale faahfaahinta waxtar badan leh waqtiga la bilaabayo in la naqshadeeyo mashruuca oo markaa si habboon loo fuliyo.
1 Su'aalaha caadiga ah ee la isweydiin karo
2 Su'aalaha kahor qaabeynta astaan
Su'aalaha caadiga ah ee la isweydiin karo
Haddii macmiil kaa codsado inaad daryeesho samee naqshadda astaantaada ama inaad dib u qaabeyso isla, waxaad badbaadin kartaa waqti yar, qeyb iyo lacag, haddii aad weydiiso waxyaabaha ku habboon. Hadaad wali tahay a arday naqshadeynta garaafka ah mise waxaad ka bilaabaneysaa adduunyada xorta ah, hubaal macluumaadka aan hoosta ku siin doono ayaa noqon doona kuwa aad waxtar u leh.
Kahor intaadan siin macaamilka midna fikradda logo ama miisaaniyad macquul ah, waxaa lagaa rabaa inaad ogaato waxa laga filayo macmiilka la sheegay inay yihiin.
Waxaad ubaahantahay inaad fahanto sababta macaamilku ugu baahan yahay astaanta, tan iyo sidaan waxaad ku ogaan doontaa sida saxda ah waxa la sameeyo iyo sida loo sameeyo. Tani waa suurtagal in lagu gaaro wareysi ama su'aalo-weydiin waana lagama maarmaan in jawaabaha macmiilku ay noqdaan kuwo faahfaahsan sida ugu macquulsan, maadaama kahor sameynta naqshada astaanta waa inaad fahamtaa macmiilkaaga, danaha iyo xaddidaadaha ay yihiin, iyo sidoo kale waa inaad gebi ahaanba la jaan qaado aragtida.
Marka, waa maxay su'aalaha la weydiinayo macaamiisha ka hor inta aysan bilaabin sameynta astaanteeda?
Waa maxay taariikhda shirkadda?
Ma jiraa waqti cayiman oo ay tahay in la buuxiyo?
Maxay yihiin adeegyada / alaabada gaarka ah ee shirkaddu bixiso?
Waa maxay ujeedka astaanta iyo halkee lagu isticmaali doonaa?
Ayaa noqon doona dhagaystayaasha bartilmaameedka ah?
Tartanku waa kuma?
Waa maxay qaababka elektaroonigga ah ee loo baahan yahay iyo cabbirkee?
Immisa talo soo jeedin ama dib-u-eegis ah ayaa macmiilku doonayaa in la sameeyo ka hor inta aan la ansixin astaanta?
Waxa ugu badan ee lagu taliyay waa soo saar dukumeenti qaab daabacan ama elektiroonig ah, ka dibna u dir macaamiisha, maadaama sidan oo kale ay noqon doonto wax yar ka dhakhso badan, ka fudud oo ka sarreeya dhammaantood, xirfadle ah.
Waad abuuri kartaa tusaale ahaan su'aalaha taas wuxuu u qaybsan yahay qaybo kala duwan, oo aad u isticmaali karto xilligan naqshadda astaanta. Uma baahnid inaad weydiiso dhammaan su'aalaha soo socda ee macmiilka, hase yeeshe, waa hab fudud oo lagu fahmo fikradaha laga yaabo inaad hayso.
Su'aalaha kahor qaabeynta astaan
Waxaad u qaybin kartaa foomka su'aalaha shan qaybood, oo noqon doona:
Shirkadda: Macluumaadka aasaasiga ah ee shirkadda, oo ay weheliso sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan iyada iyo adeegyadeeda / alaabteeda.
Sumadda: Qeexida walxaha tilmaamaya astaanta, taasi waa, "Sumadeynta".
Xulashada Naqshadeynta: Qeexitaanka, doorbidyada iyo filashooyinka ku saabsan muuqaalka muuqaalka shirkadda.
Bartilmaameedka Bartilmaameedka: Qeexitaanka soo-dhoweyaha qumman ee lagu garto astaanta, taasi waa, bartilmaameedka.
Dheeraad ah: Miisaaniyadda, waqtiga, shakiga, iyo kuwo kale.
Su'aalo ku saabsan naqshadeynta astaanta
Marka lagu daro su'aalaha la weydiinayo kahor Markaad sameyneyso astaanta, waa inaad tixgelisaa waxyaabaha soo socda:
U sheeg macmiilka waxa ku saabsan tiro ku filan oo dib u eegis ah iyo kharashaadkooda, iyadoo cadeynaysa in kharashku ku kala duwan yahay tirada soo jeedinta hore.
Waxaad awoodi kartaa la jaanqaadi kara baahiyaha gaarka ah ee macmiilkaaga ama aad leedahay heer tayo ah oo wax ku kordhinaya shaqadaada, wax walba way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay waxaad rabto inaad bixiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Maxay yihiin su'aalaha la weydiinayo macaamiisha ka hor intaadan bilaabin naqshadeynta astaanteeda?